Soisa · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny Soisa
Mediam-bahoaka 06 Oktobra 2021
Misy fikambanana iray ao Soisa, KomunIKON, miketrika karazana fifampiresahana ampiasàna ny maso mba hahafahan'ireo olona avy amin'ny fiteny samihafa hifampiresaka tsy misy olana. IKON no iantsoan-dry zareo azy io
Afrika Mainty 13 Avrily 2021
Afrika Mainty 10 Novambra 2019
Frantsa 06 Jona 2018
GV frantsay-faneno, meet up [fivoriana sy fihaonana] tao Lyon ny 26 sy 27 mey. Endrika sy feo.
Davos: Topimaso sy Fandraisana Anjara Amin'ny Alàlan'ny Lahatsary
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 07 Avrily 2018
Hatao ny 23 Janoary ka hatramin’ny 27 Janoary ny fihaonambe fanaon'ny World Economic Forum (Zaikabe momba ny Toekarena Eran-tany) hivorian'ny mpitarika ara-pôlitika sy ara-barotra [...] afaka mandray anjara amin'ity zaikabe ity ny olon-tsotra amin'ny fandrosoana ny heviny mba hahatonga ny tontolo ho toerana tsara kokoa.
Afrika Mainty 17 Septambra 2017
Eoropa Afovoany & Atsinanana 05 Febroary 2017
Netizen Report: Eken'ireo Olom-pirenena Soisa Ny Fanarahamaso
Hafanàm-po nomerika 01 Oktobra 2016
Resy tamin'ny fitsapankevi-bahoaka ireo Soisa mpikatroka mafàna fo, raràn'ireo Jordaniana manampahefana ny fandrakofam-baovao momba ilay famonoana mpanoratra, ary mandany vola be noho izay efa fantatra tany aloha i Meksika mba ho an'ny fitaovana fanarahana maso.
"Tsy manao sary hosodoko mihantahanta toy ny an'ireo fanoharana zavamaniry kelin'ireo ramamabe aho,''